Nhau - Kudzidzisa
PaP & Q, isu tinonzwisisa kuti mhando yepamusoro, yakanyatsogadzirwa maturusi mhedzisiro mune zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mashandisiro anoita zvinhu uye hwakareba hupenyu hwechishandiso. Uye zvakare, chirongwa cheP & Q chinoshanda chekuchengetedza chirongwa chinovimbisa kuita kwadzo, kuvimbika uye kurarama kwenguva refu.
Kana zvasvika pakushandisa zvishandiso, isu tinoshandisa nzira dzekufunga uye dzinoonekwa nhanho dzese dzenzira.
Kunyangwe isu tiri kutsvagisa chishandiso kuvaka, kugadzira turu yekushandisa-mumba kana kunyange kugadzirisa chimbo chiripo chisiri kumhanya sezvachinofanira, P&Q ichave nechokwadi chekuti une maturusi akakodzera ebasa.
● In-imba jira simbi muforoma & chishandiso kuvaka
● Imba-yekumanikidza kufa-kukanda chishandiso kuvaka
● Chishandiso kuvaka kutsvagisa uye manejimendi
● Zviripo zviripo shanduko uye kugadzirisa
● Kugadzirisa maturusi uye kuongorora
● Jigs uye zvigadziri
- CNC machine Fixtures
- Powdercoat masking jigs
- Chigadzirwa chaicho jigs uye zvigadziriso
- Kumanikidza kuyedzwa uye kuongorora majegi
P & Q inopa mutengi mutengi tooling pamwe hwose garandi. Kamwe kubhadharwa nevatengi, P&Q ichave mutoro kune ese ekushandisa ekugadzirisa uye kugadzirisa mutengo.
P&Q yekushandisa pamwe ne100, 000 yehupenyu hupenyu hwakareba kazhinji. Kana iwo maodha ari pamusoro pe100, 000 pcs. P&Q ichagadzira chishandiso chitsva pazvinenge zvichidiwa uye haizobhadharise chero mari yekushandisa kubva kune vatengi.
P & Q's huwandu hwesarudzo dzekukanda hwakawanda; kugadzira zvigadzirwa zvinobva pa7 gramu kusvika ku30 Kilograms. Yedu yekukanda renji inoshandisa hafu otomatiki yakakwira-kumanikidza kufa-kukanda michina, yakaderera-kumanikidza giravhiti michina, ruoko-yakadururwa mafuru, uye zvese zviri pakati.
Isu tinopa yakasimba simba, yakasimba yakasimba simbi simbi inofa pamwe chete-kamwe-kushandiswa, yekudyara jecha kukanda. Yedu renji yekushandisa inobvumira yakanyatsojeka uye inodzokororwa castings, pamwe nekwaniso kubvumidza vedu vane hunyanzvi casters kujekesa hunyanzvi hwavo mune yega yega kukanda. Isa zvakapusa: kana ichida kukandwa isu tine hunyanzvi & tekinoroji yekuikanda. P&Q yakanaka imwe sarudzo yesarudzo yako.